Ugu Weyn Ee Pasternak
Wax kasta oo aad u baahan tahay si aad u ogaato for parsnip sii kordhaya ka soo abuur in berrin bannaan
Waxaa ka mid ah beerta waxaa jira fikrad ah in parsnip sii kordhaya miraha waa cajiib ah adag. Iyo dhammaan sababtoo ah waxa uu leeyahay biqilka abuur hooseeyo - wax ka badan 50%. Waxaa la aaminsan yahay in qaabkani uu siiyay nuxur sare oo ah saliidaha lagama maarmaanka ah. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu kaydin karaa wax ka badan hal sano. Si kastaba ha noqotee, haddii aad ka warqabto sifooyinkaas oo aad u adeecsan tiknoolajiyada beeraha, waxaad heli kartaa natiijooyinka la filayo.
Cunnooyinka goosashada parsnip ee jiilaalka
Sida dhirta kale oo badan, parsnip ayaa muddo dheer caan ku ahaa faa'iido iyo xitaa bogsiinta guryaha. Tani waxay keentay joogitaanka habab badan oo diyaarintiisa ah. Cuntooyinka xayawaanku waxay daneynayaan dadka dareenka wadnaha, xididdada dhiigga iyo xubnaha unugyada dheef-shiidka. Intaa waxa dheer, warshad qaas ah waxay u dhaqantaa sida duriinka oo ah kaaliyaha koowaad ee colic, iyo dadka qaar ayaa inta badan isticmaala xitaa si looga hortago xiiritaanka.
Khudaarta Pasternak: Guryaha faa'iidada leh iyo ka hortaga
Pasternak waa mid ka mid ah khudaarta caanka ah ee ugu caansan gobolka. Khudraddan waxaa lagu qeexay qoyska Umbrella. Dadkoodu waa weyn yihiin, oo ay wehliyaan sifooyin gaar ah oo tayada waxtar leh, ka dhigaya meel adag oo aan loo baahnayn meelo badan oo nolosha nolosha ka mid ah: nafaqada, farshaxanka dhaqanka iyo dawooyinka dhaqameedka, cosmetology.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Pasternak 2019